कम्युनिष्ट एक भए हामी किन नहुने ? – Hamrosagarmatha.com
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युष्टि शक्तिहरुको एकताले कांग्रेसीहरुलाई समेत एक हुन दबाब बढेको बताएका छन । राजधानीमा नेपाल प्रेस युनियनको २७ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै देउवाले माओवादी र एमाले बीचको एकताले कांग्रेसीहरुलाई समेत एक हुन दबाब बढेको बताए ।
‘कम्युष्टिहरु एक भए हामी किन एक नहुने ? एउटा निर्वाचन हार्दैमा आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन, पटक पटक हारेको कांग्रेसले धेरै पटक जितेको छ, एक होऔं फेरी पनि जितिन्छ,’ देउवाले भने । उनले आफू पार्टी सभापति भएका नाताले सँधै पार्टीलाई एक बनाए अघि बढाउने पक्षमा नै रहेको भन्दै कसैले गेट आउट भन्दैमा पार्टी बाट कसैलाई पनि हटाउन सहज नहुने समेत प्रष्ट पारे । ‘म पार्टी सभापति हुँ मेरो चाहना पार्टीलाई एक भएर लैजाने छ, अरु आउँदा पनि सबैको इच्क्षा त्यही हुने हो, गेट आउट भन्दैमा हुँदैन,’ देउवाले थपे । प्रजातन्त्रको सबै भन्दा ठूलो आवश्यकता नै प्रेस स्वतन्त्रता भएको भन्दै देउवाले स्वतन्त्र प्रेसको मान्यतामा कांग्रेस कहिल्यै विचलित नहुने स्पष्ट पारे । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संघियतमा मुलुक अघि बढ्दै गर्दा संघियताकै लागि लड्ने शक्ति पछि परेको दाबी गरे ।
‘मुलुकमा संघियता र लोकतन्त्रका लागि जसले लड्यो, त्यही शक्ति आज पछि परेको छ, संघियता शब्द उच्चारण नै नचाहने शक्ति सत्तामा पुग्यो, कलाकारिताले मुलुकमा राजनीतिक स्थायीत्व हुँदैन,’ पौडेलले भने । उनले संघियता मार्फत अघि बढिसकेको देश अब पछि हट्न नसक्ने भन्दै संसदलाई विकासका नाममा बजेट बाडेर स्थानीय तहको अधिकारलाई खोस्न नहुनेमा जोड दिए ।
पार्टी भित्रको एकताका विषयमा भने पौडेलले इच्छाले मात्रै पार्टी एक नहुने बताए । ‘इच्छ्या गरेर मात्रै एकता हुँदैन, न्याय, निश्पक्षता र पारदर्शिताबाट मात्र एकताको सन्देश दिन सकिन्छ,’ वरिष्ठ नेता पौडेलले थपे ।
वर्तमान सरकारको सय दिनलाई भने नेता पौडेलले फुस्रो पातको संज्ञा दिए । हुने विरुवाको चिल्लो पात भनेझै सरकारको सुरुवाती दिन नै फुस्रो भएको पौडेलले बताएका हुन । कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भने सरकारको सय दिनको काम संघियता र समावेशिताको विरुद्ध सिण्डीकेट लाद्न मात्रै केन्द्रित भएको बताए । निधिले प्रधानमन्त्री केपी ओली दक्षिण तर्फ गएर लम्पसार परेको भन्दै कहिले उत्तर र कहिले दक्षिण गर्दा राष्ट्रियता लतारिएको बताए । महामन्त्री डा शशांक कोइरालाले पार्टीलाई एकताबद्ध रुपमा अघि बढाउन आफुले भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए । कोइरालाले कांग्रेसका लागि आगामी निर्वाचनमा ५१ प्रतिशत मत चाहिने भन्दै पार्टी भित्रको गुट उपगुट अन्त्य गर्नु पर्ने नै मूल आवश्यकता रहेको औंल्याए । नेता डा मिनेन्द्र रिजालले आफुलाई मन नपरेको कुरा लेख्न बन्द गराउँदा आफुलाई मन परेको कुरा लेखाउँने स्वतन्त्रता समेत गुम्ने भएकाले प्रेसलाई स्वतन्त्र रुपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न दिनु पर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्रि सिग्देल, प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेत, प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष महेश्वर दाहाल, वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरही, तारानाथ दाहाल, प्रेस युनयन महासचिव अजयबाबु शिवाकोटी, टे«ड युनियनका अध्यक्ष खिलानाथ दाहाल लगायतले संचार क्षेत्रको भूमिका र आवश्यकताका विषयमा धारणा राखेका थिए ।